FAALLO: Yaa is haya, Yaase ku Guulaysan doona loolanka doorasho ee 2016-ka? – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
FAALLO: Yaa is haya, Yaase ku Guulaysan doona loolanka doorasho ee 2016-ka?
by admin 31st August 2016 1st September 2016 0121
Waxaa la filayaa Dabayaaqadda Sanadkan in Soomaaliya doorasho ka dhacdo. Doorashada ayaa tii hore ka Gedisan iyadoo laga guurayo hannaankii doorasho ee oday dhaqameedka soo magacaabayey Xildhibaanka loona gudbay hannaan “Ergo”. In ka badan 50 Xubnood ayaa soo dooranaya Xildhibaanka, iyaddoo ay doorashadu ka dhacayso Maamul Goboleedyadda dalka ka jira iyo Muqdisho intaba. Waxaa durbaba bilawday loolan aad u wayn oo u dhexeeya xubnaha ku loolamaya kuraasta xildhibaan iyo kuwo aqalka sare.
Loolankan ayaa waxaa laga dareemayaa Magaaladda Muqdisho iyo Magaalooyinka kale ee xarumaha u ah Maamul goboleedyadda. Wararka isa soo taraya ee laga helayo madaxda Madasha iyo xubnaha beesha caalamka waxay sheegayaan in laga yaabo in aqalka sare uu dib u dhac ku yimaado, haddaba hadii ay xulista Baarlamaanka soo afmeeranto waxaa dhici doona tartanka madaxtinimo ee lagu wado dabayaaqada bisha Oktoobar in ay dalka ka dhacdo.
Faallada soo socota waxaa ku eegi doonaa Musharraxiinta ugu cadcad loolanka xilka Madaxweynimo, duruufaha doorashadda ku xeeran iyo fursadaha ay musharaxiintu haystaan.
Xasan Sheekh Maxamuud: fursadaha uu Xasan haysto waxaa ka mid ah in uu Madaxweyne xilka haya, waxaa la tuhunsanyahay in uu kaysaday dhaqaale badan, wuxuu kaloo haystaa koox abaabulan (Damul Jadiid). Dhinaca kale, caqabadaha Xasan haysta waxaa ka mid ah; dadka oo si wayn uga soo horjeeda, waxqabadan la’aan saamayn wayn ku yeelatay dadka iyo dalka, gaar ahaan dhinaca Amniga, Musuqmaasuq faro ka bax ah, colaad siyaasadeed uu ka kasbaday qabaa’isha iyo siyaasiyiinta Soomaalida, beesha caalamka oo si wayn uga soo horjeeda, kooxda Damal Jadiid iyo beesha Abgaal oo isku dagaalsan cida hogaaminaysa Olalihiisa doorasho, Xasan oo cid uu aamino waysan iskana dhaadhiciyey in cid walba ay khiyaaneyso oo ay ku meel gaarayso, iyo siyaasiyiita oo aaminay in Xasan uusan soo noqon doonin cid walibana ka danaysato, saaxibkiisii ugu waynaa olalahiisa doorasho Faarax C/qaadir oo lagu dheganyaha, isagoona tartan adeg uu kala dhexeeyo Fahad Yaasiin, una sii dheer tahay markab hubsiday oo u socday Yeman, kaasi oo lagu eedeeyey inuu isaga halkaasi u raray, iyo saaxibkiisii kale ee ugu waynaa C/kariin Guuleed oo ay kala tageen, islamarkaana ay musharixiin kale ka taagan yihiin isla beeshaasi, inkastoo Soomaalida kale aaminsan yihiin inay waqti ku filan abgaal dalkan hoggaamiyeen.
Shiekh Shariif: Fursadaha uu haysto waxaa ugu muhiimsan in uu yahay madaxweyne hore, qabtay waxyaabo muuqda dhinaca Amniga iyo siyaasada, kana fogaaday colaado siyaasadeed intii uu xilka hayey. Caqabadaha haysta Shariif waxaa ka mid ah in uusan haysanin dhaqaale uu ololihiisa ku maalgeliyo, sidoo kale ma haysto team ama koox abaabulan waana ay kala tageen kooxdii Aala Sheikh iyo Xisbiga Daljir. Sheekh Shariif caqabada kale ee ugu way ee haysataa waa mid ka imaanaysa hab dhaqankiisii siyaasadeed oo ah is bedbedel iyo kalsooni la’aan dadka la shaqeeya ah, taasoo keentay in uu waayey saaxibidiis dhabarka ku wada dhufto siyaasadana uu saaxib ku yeelan waayo. Way adag tahay in siyaasiyiintu aaminaan Sheekh Shariif.
Waxaa kaloo haysta in Musharaxiin badan oo qabiilkiisa ay taaganyihiin, gaar ahaan madaxweynaha haatan xilka haya. Dad badan ayaa u arka in Sheekh Shariif ay ku haboonayd in uu jiirada dheeraysto oo ay adagtahay ninkii kurisiga ka ritay in uu isagu ka kiciyo. Dad badan waxay kula taliyeen in uu qof kale dhisto si uu beri fursad ugu helo in la dhiso.
C/raxmaan C/shakuur: Fursadaha uu haysto waa in uu yahay siyaasi firfircoon oo isku darsaday khibarad iyo fikir siyaasadeed. Wuxuu xiriir dhow la leeyahay xooggaga siyaasadda sida Daljir iyo Islaax. Wuxuu kalo xiriir xooggan la leeyahay siyaasiinta kale iyo madaxda maamul goboleedyadda qaarkood sida Shariif Xasan iyo C/weli Gaas iyadoo ay dhowaan heshiis qarsoodi ah galeen C/kariin Guuleed. Xisbiga Wadajir ee dhawaan wax ka dhisay ayaa dad badan ku kusoo biireen, iyaddoo si deg deg ahna u noqday Xoog siyaasadeed oo saaxada siyaasada ka muuqda.
C/raxmaan wuxuu kaloo xiriir dhow la leeyahay beesha caalamka, gaar ahaan UN- ka iyo dawladda Ingiriiska. Warar hoose ayaa sheegaya in qaar ka mid ah wadamada Khaliijka ay taageeri doonaan olalahiisa doorasho, iyaddoo uu ololahaas si xoogan uga socdo magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa isweydiinaya halka laga maalgeliyo ololaha doorasho ee C/raxmaan C/shaakuur oo dhowr xarumood ku leh magaalada Muqdisho, haystana team iyo koox si wayn u abaabulan.
Wuxuu kaloo C/raxmaan fursad ah abaabulka xoogan ee ay Beesha Habargidir ugu jirto in ay kursiga sanadkaan hantaan, wuxuuna u muuqada in uu yahay musharraxa ugu xoogan beesha dhexdeeda. C/naasir oo ah nin qurbaha ka yimid khibrad siyaasadna lahayn ayaa lagu wadaa in dhowaan laga reebo tartan oo C/raxmaan loo daayo. Caqabadaha haysta C/raxmaan waxaa ka mid ah arrintii Badda oo mar kasta lala xariiriyo ololihiisa doorasha, waxaase muuqata in uu qaatay olole uu si wayn dacaayadaas isaga fogaynayo , taasoo aad moodo in ay dad khubaro dhinaca xiriirka dadwayna ah ay ka caawiyeen, taasoo ay Soomaalida inteeda badan ka qanceen, kadib markii uu arrinkaas fasiraad buuxda ka bixiyey. Waxaa kaloo caqabad ku ah in rag beeshiisa ka tirsan sida C/raxmaan Odowaa, Mahaad Salaad, Ganacsato beesha Cayr sida Xuseen Goley ay ku daaban yihiin Xasan Sheekh.
Cumar C/rashiid: Waa nin mar labaad noqday Ra’iisuwasaare, wuxuuna fursad u haystaa in uu yahay Ra’iisuwasaare haatan xilka haya oo galaangal badan ku leh qaabka doorashada. Wuxuu haysta fursad uu ku noqon karo musharraxa keli ee Puntland ka socda, taageerana ka raadsada Juballand. Cumar wuxuu kaloo haystaa in ay beesha Hawiye cuqdad badan ka qabin. Caqabadaha Cumar haysta waxaa ugu wayn kala daadsanaan iyo isagoo saaxiibo siyaasada ku tabcan, musharaxiin beeshiisa ah oo dhinac socda, Saciid Deni, Maxamad C/risaaq, Cawil, Cali Xaaji, Faroole iyo Xaaji Maxamad Yaasiin. Cumar waxaa lagu xanta in aysan dhab ka ahayn arrinka doorashadda ee uu doonayo in uu heshiis wax ku bedelasho la galo musharaxiinta kale, ilaa iyo hadda kuma dhawaaqin inuu musharrax yahay, mana dhisin team ama koox ka shaqaysa ololihiisa doorasho.
Wadanka Imaaraadka oo la filayey in ay taageeraan waxay taageeradoodii u kala qaybiyeen laba musharax kale oo beesha Hawiye ka tirsan, kadib markii ay dawlada Itoobiya arrinkaas kula talisay. Inkastoo uu C/raxmaan C/shakuur in badan cadeeyey arrinta Badda Cumar way haystaa isaga iyo Sheekh Shariifba. Xasan Sheekh iyo ragiisana waxay doonayaan in ay arrinkaas u istcimaalaan, inkastoo dadka codka bixina ay yihiin Xildhibaano lacag doon ah.
Maxamad Farmaajo: Farmaajo wuxuu haystaa fursada ah in uu ahaa ra’iisuwasaare hore, taageerayaalna uu leeyahay, waana nin aan cadaw badan lahayn. Farmaajo caqabadaha haysta waxaa ka mid ah in uusan team ama koox abaabulan haysanin, sidoo kale dhaqaale uu ku maalgeliyo ololihiisana ma haysto, waana tan keentahay in uusan weli wax bilaabin. Puntland iyo Jubbaland oo iyagu haatan ah laba maamul goboleed ee magaca Beesha Daarood miisaanka siyaasadeed ku haysta waxay u arkaan Farmaajo iyo beesha Mareexaanba in loolan kala dhexeeyo, waxaana jira in Saacid iyo C/weli xiirane ay ku haystaan beesha Mareexaan. Waxaa dheer in ay Beeshiisa Mareexaan ay si wayn u qaybsantahay. Sidoo kale Shariif Xasan oo saamayn wayn ku leh siyaasada ayey Farmaajo iska soo horjeedaan. Dhibka ugu way ee farmaajo haysta waxaa ka mid in siyaasiyiin badan, iyo dawadaha Soomaaliya daneeyaba ay u haystaan in uu (plan B qarsoon) ee Xasan Sheekh yahay. Isaga iyo xubnaha la shaqeeya ee uu Fahad Yaasiin ugu horeeyo waxay ka fekerayaan in ay taageerayaasha Xasan Sheekh ku qanciyaan in ay Farmaajo taageeraan maadaama uusan Xasan Sheekh fursad lahayn.
Waxaa muuqata in sanadkan ay musharaxiita final ka tegeya oo arrinku ka go’an yahay aysan badnayn, xitaa ma badna musharaxiinta xilal kale ku doonaya musharaxnimada ama doonaya in ay ku soo cid galaan siyaasadda Soomaaliya. Beesha Caalamka oo Xasan ku daashay waxay si wayn u raadinayaa Siyaasi Hawiye oo Xasan Sheekh bedela, maadaama Hawiye weli culays ku leeyihiin siyaasada Soomaaliya, gaar ahaan tan Muqdisho. C/weli Gaas wuxuu doonayaa in sanadka Hawiye aan Abgaal ahayn aado si fursadda Daaroodka ay u sii badato, marka uu I soo sharraxayo sanadka 2020, halka Shariif Xasan uu ku dadaalayo in uu Daarood kursiga Afhayeenka Baarlamaanka ku fariisiyo, taasoo colaad siyaasadeed Digil iyo Mirifle iyo Daarood ka dhex abuuri doonto, iyadoo tii dagaalkii 4.5 weli taagantahay. Waxaa intaa dheer in beesha Direed, gaar Isaaqa ay aad uga hor imaan doonaan Madaxweyne Daarood ah. Taasoo dhan waxay tilmaamaysaa in labada musharax ee Hawiye kazoo jeeda ee la kala dooran doono ay Waxayse u muuqata in labada musharax ee la kala dooran doono sanadkan ay yihiin Xasan Sheekh iyo C/raxmaan C/shakuur. Waase laga yaabaa in waayuhu wax kale soo saaraan.
Maxamed Ali Jama
Gudomiyaha Barlamanka Galmudug oo garay…..
WAR CUSUB: Maxaadan Ogeyn Oo Laga Soo Sheegayaa Gobalka Bakool???? (War Ayaan Idinkaga Wadnaa)
Daawo Sawirro: Qaar kamid ah dadkii ku dhaawacmay Qaraxii zoobe ee loo qaaday Turkiga oo Maanta Muqdisho lagu soo celinaayo
Askari lagu dilay Magaalada Kismaayo iyo Faahfaahin kasoo baxaysa dilkiisa.